Imvukuzane enkulu ebusweni bakhe yaba yinto egqamile ekubukekeni komshado kamakoti - Psychology 2022
Imvukuzane enkulu ebusweni bakhe yaba yinto egqamile ekubukekeni komshado kamakoti
Umuntu ngamunye uhlukile. Futhi wonke umuntu unama-moles. Kwabanye, lawa amachashazi amancane ezindaweni ongawabona kuphela lapho ulele embhedeni owodwa nomuntu. Futhi kwabanye, zinkulu futhi zitholakala ngqo ebusweni.
Ngokuvamile, abantu bavame ukufihla lezo zingxenye zemizimba yabo ezihluke kakhulu kunejwayelekile. Kodwa enye intombazane - uFerryn Roy - elungiselela ukushada, yanquma ukuthi ngosuku lomshado ngeke azame ukuphenduka omunye umuntu, kodwa uzozibonakalisa ukuthi ungubani. Ngemvukuzane engu-10 cm esihlathini esingakwesokudla.
UFerryn wayevame ukuzonda uphawu lwakhe lokuzalwa futhi alubheka njengophawu olubi, ezama ukufihla ibala ngazo zonke izindlela. Manje intombazane iqinisekile ukuthi impilo yayo yonke ngeke ihlanganyele ezenzweni ezingenangqondo, izama ukumboza imvukuzane ngamathani wezimonyo:
Ngiyamukela ngokuphelele imvukuzane yami - futhi angisoze ngenza noma yisiphi isenzo sokukhanyisa isikhumba ngaphansi kweso lami langakwesokudla.
Ephila nemvukuzane enkulu ebusweni bakhe, uFerryn wabhala incwadi yokuzithanda ebizwa ngokuthi Her Mark. Indlela yowesifazane eya ezinhlosweni zangempela”. Ngosizo lwencwadi yakhe, intombazane ifuna ukusiza abanye abantu abakhubazekile ngokubukeka ukuze ibasize bathole ukuzwana nabo kanye nomhlaba obazungezile.
Uphawu lwami lokuzalwa alungenzanga nje kuphela lokho engiyikho, kodwa ngosizo lwalo ngisiza abanye abantu ukuba bamukele futhi bathande ukwehluka kwami.
Ngizizwa ngizethemba ngibuka esibukweni. Uma uyeka ukukhathazeka ngento efana naleyo ngokwakho, abantu abaseduze kwakho ngendlela emangalisayo bayayeka ukukubuka futhi bakubuze imibuzo ewubuphukuphuku.
UFerryn Roy kanye nophawu lwakhe lokuzalwa kuwubufakazi obengeziwe bokuthi ukuzethemba kanye nokuba nethemba kuhlale kuvela ngaphakathi. Wonke umuntu unakho konke ukuze azizwe ejabule.
Indlela yokukhetha ubucwebe obufanele ebusweni bakho ukuze bahlobise ngempela
"Ipentshisi" i-fluff ebusweni: yini okufanele uyenze uma ufuna ukuyiqeda
Ngokukhula, izinwele ze-vellus zingaba zimbi futhi zibe mnyama. Abesilisa, njengomthetho, abanandaba nalokhu, okungenakushiwo ngabesifazane. Sikutshela ukuthi ungasusa kanjani izinwele ze-vellus futhi ugcine ukukhanga
Imvukuzane emzimbeni: ingabe sikhona isizathu sokukhathazeka?
Ama-moles emzimbeni womuntu, ngakolunye uhlangothi, athakazelisa kakhulu, kanti ngakolunye, ayingozi. Ngezinye izikhathi zingaba izimpawu zezinkinga ezinkulu zempilo. Siyaqonda, siyajabula noma sikhathazeke
U-Tina Karol wabonisa abazali bakhe ngokuhlonipha iholide lomndeni
Vuselela futhi uvuselele: funda indlela yokusebenzisa kahle i-blush ebusweni
I-Blush yakhelwe ukwenza ubuso bube busha futhi buphumule, igqamisa ukuthamba kwabo. Angasetshenziswa futhi ukulungisa amacontour obuso. Indlela yokusebenzisa i-blush ngendlela efanele, funda endabeni yethu